उद्योगी रुप ज्योतिविरुद्दको जाहेरी फीर्ता लिन विगेन्द्रकृष्णको निवेदन – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२३ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:२८ English
उद्योगी रुप ज्योतिविरुद्दको जाहेरी फीर्ता लिन विगेन्द्रकृष्णको निवेदन
काठमाडौँ, २८ कार्तिक । उद्योगी डा. रूप ज्योतिविरुद्धको जाहेरी फिर्ता लिन जाहेरी दिएका विगेन्द्रकृष्ण मल्लले निवेदन दिएका छन् । पूर्व अर्थराज्यमन्त्री समेत रहेका रूप ज्योतिविरुद्ध मल्लले १ करोड २६ लाख रुपैयाँ ठगीको जाहेरी दिएका थिए ।
मल्लले जाहेरी दिएपछि डा. ज्योति छोरीसहित पक्राउ परेका थिए । उनीहरूलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदाललत काठमाडौंले पहिलोपटक ३ दिन र दोस्रोपटक ५ दिन म्याद थपेको छ । थपिएको म्याद आज सकिँदैछ । तर म्याद सकिनु अगावै मल्ल जाहेरी फिर्ता पाऊँ भन्ने निवेदन लिएर प्रहरीकहाँ पुगेका छन् ।
२८ कार्तिक २०७६, बिहीबार १३:३९ मा प्रकाशित